Kutheni iKhanada inezoLwimi eziLwimi ezi-2
ICanada iyilizwe elithile ngeelwimi "zaseburhulumenteni". IsiNgesi nesiFrentshi sinandipha isimo esifanayo njengeelwimi ezisemthethweni kuzo zonke iziko karhulumente karhulumente waseCanada. Oku kuthetha ukuba uluntu unelungelo lokunxibelelana kunye nokufumana iinkonzo, kumaziko karhulumente karhulumente kwiNgesi okanye kwisiFrentshi. Abasebenzi baseburhulumenteni baseburhulumenteni banelungelo lokusebenza ngolwimi olusemthethweni olukhethiweyo kwiindawo ezimbini ezikhethiweyo.
Imbali yeeLwimi eziBini zeCanada
Njengama-United States, iKhanada yaqala njengekoloni. Ukususela kuma-1500s, yayiyinxalenye yeNew France kodwa kamva yaba yiColoni yaseBrithani emva kweMfazwe Yeminyaka Yesixhenxe. Ngenxa yoko, urhulumente waseKhanada waqonda iilwimi zababini abaqolonisi: iFransi ne-England. UMthetho-siseko we-1867 wawuquka ukusetyenziswa kweelwimi ezimbini ePalamente nakwiinkantolo zombuso. Kwiminyaka kamva, iKhanada yomeleza ukuzibophelela kwayo kwiilwimi ezimbini xa ithe yadluliselwa kuMthetho weeLwimi ezisemthethweni ka-1969, owamisela kwakhona imvelaphi yomgaqo-siseko weelwimi zaseburhulumenteni ezisemthethweni kunye nokubeka ukukhuselwa okwenziwe ngohlobo lweelwimi. Imfazwe Yeminyaka Exhenxe . Ngenxa yoko, urhulumente waseKhanada waqonda iilwimi zababini abaqolonisi: iFransi ne-England. UMthetho-siseko we-1867 wawuquka ukusetyenziswa kweelwimi ezimbini ePalamente nakwiinkantolo zombuso. Kwiminyaka kamva, iKhanada yomeleza ukuzibophelela kwayo kwiilwimi ezimbini xa ithe yadluliselwa kuMthetho weeLwimi ezisemthethweni ka-1969, owamisela kwakhona imvelaphi yomgaqo-siseko weelwimi zaseburhulumenteni ezisemthethweni kunye nokubeka ukukhuselwa okwenziwe ngohlobo lweelwimi.
Iilwimi ezininzi ezisemthethweni zikhusela amalungelo angamaKhanadi
Njengoko kuchazwe kwiiLwimi zeeLwimi ezisemthethweni zika-1969, ukuqwalaselwa kokubili isiNgesi kunye nesiFrentshi kukukhusela amalungelo abo bonke abantu baseCanada. Phakathi kwezinye izibonelelo, uMthetho uqaphele ukuba izakhamuzi zaseCanada kufuneka zikwazi ukufikelela kwimithetho yombuso kunye namaxwebhu karhulumente, kungakhathaliseki ulwimi lwabo lwendalo.
Umthetho uphinde ufuna ukuba iimveliso zabathengi zibandakanya ukupakishwa kweelwimi ezimbini.
Ngaba iilwimi ezisemthethweni zisebenziswa kulo lonke elaseKhanada?
Urhulumente wase-Canada unikwe igunya lokuphucula ukulingana kwesimo kunye nokusetyenziswa kweelwimi zesiNgesi kunye nesiFrentshi ngaphakathi koluntu lwaseKhanada kwaye unike inkxaso ekuphuhliseni iindawo zesiLwimi zesiXhosa kunye nesiFrentshi. Nangona kunjalo, inyaniso kukuba abaninzi baseKhanada bakhuluma isiNgesi, kwaye kunjalo, abaninzi abantu baseCanada bathetha olunye ulwimi.
Wonke amaziko aphantsi kolawulo lwama-federal axhomekeke kwiilwimi ezimbini ezisemthethweni, kodwa amaphondo, oomasipala, kunye namashishini abucala akufuneki basebenze kwezo zombini iilwimi. Nangona urhulumente wesigqeba uqinisekisa iinkonzo ezimbini kwiindawo zonke, kukho imimandla yeCanada apho isiNgesi yilwimi eluninzi olucacileyo, ngoko urhulumente alisoloko enika iinkonzo zesiFrentshi kule mimandla. Abantu baseKhanada basebenzisa ibinzana elithi "apho iziqinisekiso zamanqaku" zibonisa ukuba uluntu loluntu lusetyenziso ludinga iinkonzo ezimbini ukusuka kurhulumente wephondo.
Amanye amazwe anamaLwimi angaphezu kwe-1
Nangona iUnited States yenye yezona zizwe ezimbalwa kuphela ezingekho ulwimi olusemthethweni, iChanada ikude nelizwe elilodwa kuphela elinelwimi ezimbini okanye ngaphezulu ezisemthethweni.
Kukho amazwe angama-60 eelwimi ezininzi, kuquka i-Aruba, iBelgium ne-Ireland.
Isishwankathelo se-Odyssey Book IV
I-Double Doubles Iincwadi zezinye iziNgqungquthela
1997 IWWE PPV Iziphumo